11. HTML ကို လေ့လာခြင်း | IT4MF
11. HTML ကို လေ့လာခြင်း
ယခုဆက်လက်ပြီး လေ့လာရမှာကတော့ Web Document များအတွင်း List များ ထည့်သွင်းရေးသားတဲ့ Style ကို လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Web Page များတွင် List များ Bullet များကို HTML ကို အသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူ ထည့်သွင်းရေးသား ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ List တွေ ထည့်သွင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိက အသုံးများတဲ့ ပုံစံနှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ Number နဲ့ ထည့်သွင်းရေးသားတဲ့ပုံစံနှင့် Bullet နဲ့ ထည့်သွင်း ရေးသားတဲ့ ပုံစံဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် Number List ကို အရင်ဆုံး ပြောပါမယ်။ Number List ပုံစံကို ရေးသားချင်တဲ့အခါမှာ <ol> </ol> ဆိုတဲ့ Element နှစ်ခုအကြားမှာ ခံပြီးရေးသားရပါတယ်။ ဒီ <ol></ol> ဆိုတဲ့ Element နှစ်ခုအတွင်းမှာ <li></li> ဆိုတဲ့ List Item များကို ထည့်သွင်းရေးသားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
<li> Element (a)</li>
<li> Element (b)</li>
<li>Element (c)</li></ol> ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Unorder List ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း Number List နဲ့ရေးသားတဲ့ပုံစံ တူညီပါတယ်။ <ul></ul> ဆိုတဲ့ Tag နှစ်ခုအကြားမှာ ရေးသားဖော်ပြလိုတဲ့ List များကို ထည့်သွင်းထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ List တွေကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း <li> </li> အကြားမှာ ဖော်ပြထားရမှာပါ။
<li> Element (c)</li>
ယခု ဒီ List Item များကို အသုံးပြုပြီး အခြေခံ Web Page လေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ကြည့်ပါမယ်။ Notepad ထဲတွင် အောက်ဖော်ပြပါပုံစံအတိုင်း HTML Coding များကို ကူးရေးကြည့်ပါ။
<head><h2> Web Development Lesson</h2> </head>
<p align="left"> <h4>Learning List Item </h4></p><br>
This is Number List
This is Unorder List
၎င်း ကို Web Browser တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လိုက်လျှင် အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။